”Somalia MIDNIMO ayay ku xoog badan tahay!” – Maraykanka oo runta u sheegay Somaliland | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Somalia MIDNIMO ayay ku xoog badan tahay!” – Maraykanka oo runta u...
”Somalia MIDNIMO ayay ku xoog badan tahay!” – Maraykanka oo runta u sheegay Somaliland
(Hadalsame) 09 Maajo 2020 – Safiirka Maraykanka Danjire Donald Yamamoto, ayaa shir jaraa’id oo uu khamiistii 7 May si toos ah u qabtay isagoo adeegsanaya adeega Zoom kuna sugan magaalada Muqdisho, waxa lagu weydiiyay su’aalo kala duwan oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya, wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya iyo xanuunka Covid-l19 oo dunida gilgilay.
Tifaftiraha wargeyska Geeska Afrika Maxamed Xuseen Jaamac (Rambo), oo ka mid ahaa saxafiyiinta ay safaaradda Maraykanku ku casuuntay shirka jaraa’id ayaa isagoo Hargeysa ku sugan wuxuu si toos h u weydiiyay safiirka Maraykanka, su’aalo ku khuseeya Somaliland.
Danjire Yamamoto ayaa waxa uu Geeska Afrika weydiyay laba su’aalood oo kala ah wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo hadda hakad ku jira iyo doorka Maraykanka iyo bal caawimada uu Maraykanku siin karo Somaliland xilligan adag ee halganka loogu jiro si looga hortaggo xanuunka Covid-19.
Danjire Donald Yamamoto, wuxuu ku jawaabay “Waa su’aal aad u fiican. Soomaalida muddo dheer ayaan ka shaqaynayay. Waxaaan la shaqeeyey Madaxwayne Cigaal, 1998-kii markii loo dejinayay qaab dhismeed Soomaaliya. Waxaan kaddib la shaqeeyey dhamaantood, Rayaale iyo kuwii kale, hadana waxaan la shaqeeyaa Muuse Biixi. Hadda waxa jira dhawr arrimood oo socda. Ta koowaad waxa weeye in Raysal Wasaaraha Itoobiya ee Abiy uu martigeliyay kullan dhexmaray Muuse Biixi iyo Madaxwayne Farmaajo. Taasi waa bilow aad u fiican.
”Arrinka kale waxa weeye in COVID-19 iyo sidoo kale dayn cafintu ay ku qasbayaan Somaliland iyo Somalia iyo maamul-goboleedyada xubnaha ka ah inay wada shaqeeyaan sababta oo ah Somaliland waxa ay sii xoogaysanaysaa marka ay taageero u haysato hamigeeda . Kenya, Itoobiya iyo Jibuuti waa muhiim, balse waxa ay ila tahay marka ay jirto isku duwid iyo iskaashi ka dhexeeya Somaliland iyo dawladda federaalka ah iyo dawlad-goboleedyada xubnaha ka ah oo u wada shaqaynaya hal mid ah inay noqon doonto mid xooggan. Waxa ay ila tahay in arrinku sidaas noqon doono. Waxaan arkaa rajo badan oo ay leeyihiin Somaliland iyo Somalia maanta oo ka badan tii aan qabay shalay, bishii hore, sanadkii hore iyo 1998-kii. COVID-19 iyo dayn cafintu waxa ay ku qasbayaan dhamaan dhinacaydu wada shaqeeyaan.”
Isagoo danjire Yamamoto hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi “Waxa ay tahay inaynu xusuusano in qurbo joogtu ay sidoo kale ciyaarto door. Waxa aynu arkaynaa qurbo-joog badan oo ciyaaraysa door muhiim ah oo ay kaga qayb qaadanayaan wada-hadalka. Waxa jira dad gudaha Soomaaliya jooga oo iyaguna door ciyaaraya. Waxa ay ila tahay in Soomaalida ay xoog badan yeelanayso haddii ay si midaysan oo kudlad ah u wada shaqeeyaan oo aad u isticmaashaan kudladaas inaad dhexgashaan dhaqaalaha gobolka iyo qaaradda.
”Balse waa inaad noqotaan kudlad. Waa kuwaas arimaha laga wada hadlay xilligan. Maraykanku wuu taageersan yahay, waxaanu doonaynaa inaanu aragno taageero buuxda oo la siiyo Somaliya and Somaliland. Waxaanu doonaynaa inaanu aragno taas, waanuna ka shaqayn doonnaa sababta oo ah dadka Somalia iyo Somaliland ayaa doonaya, anana markaas sidaas ayaanu la rabnaa. Way dhan tahay.”
Xigasho: Horncable TV
Previous articleImaamka Masar ugu wayn & Imaaraadka oo soo dhoweeyey ”cibaado” uu ku baaqay Pope-ka Katooliggu
Next articleDAAWO: ”Meeshaan saf lama galo ee sunuud ayaa ka shaqaysa!” – Arag xarunta ugu musuqa badan Gobolka Banaadir